အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံခဲ့သော ဘ၀တစ်ခု၏ ရာဇ၀င်: 2009
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Tuesday, December 29, 2009 in နည်းပညာများ
ဖြိုးဇာနည့် Mr-Zarni့့ပီအိတ်ဝိုင်အို ဇတ်အေအာအန်အိုင့် :P
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Monday, December 21, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့
(၁)မိုးသက်လေပြင်းကျချိန် ချစ်ိသူ စိုမှာစိူးလို့အကာအကွယ်ပေးပြီးလိုက်မိုးပေးသူ
(၂)သူ့ လက်ကို တွဲမိချိန် ကိုယ့်စီက ကြောက်ရွံ့ မှုတွေ အဝေးကို ပြေးစေသူ
(၃)ချမ်းအေးတဲ့ဆောင်းမနက်မှာ ကိုယ့်ကို နွေးထွေးတဲ့ လက်တစ်စုံပေးသူ
(၄)ကိုယ့်စိတ်ပျက် အားငယ်လို့ မျကရည်ကျချိန် မှီစရာ ပုခုံးတစ်စုံ ငှားပေးသူ
(၅)ဂျုလီယာ ရောဘတ်ကို ကြိုက်ပေမယ့် ဒီကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံး အလှဆုံးဟာကိုယ်
(၆)ဂျက်ကီချန်းကားတွေကြိုက်ပေမယ့် လွမ်းဆွေးစရာ ကိုးရီးယားကားတွေကိုမပျင်းမရိဘဲ
ကိုယ်နဲ့ အတူ လိုက်ကြည့်တက်သူ
(၇)ကောင်းကင်က ကြယ်တွေကို ကိုယ့်နဲ့ အတူ စိတ်ရှည်လက်ရှည် လိုက်ရေတက်သူ
(၈)ကိုယ်မွေးနေ့ ကိုမှတ်မိပြီး လက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ မေ့တက်သူ
(၉)သူ့ ရင်ဘတ်ကို ထုပြီး ကိုယ်ဒေါသထွက်ချိန် အနမ်းတစ်ပွင့်နဲ့နှစ်သိမ့်တတ်သူ
(၁၀)မျိုကကျပေမယ့် ကိုယ်ချက်တာ အကောင်းဆုံးဆိုပြီး အားပါးတရ စားပြတတ်သူ
(၁)ငြင်းခုံရန်ဖြစ်ချိန် ခေါင်းငုံ့ အရှုံးပေးချင်ပေမယ့် တင်းခံပြီးပြန်ငြင်းတတ်သူ
(၂)ချစ်သူရဲ့ ဂတိသစ္စာတွေကို နှလုံးပေါ်မှာ ထွင်းတားပေမယ့် ”ကျွန်မကို ချစ်မိတာ
နောင်တ မရဘူးလား” လို့လိုက်မေးတက်သူ
(၃)လပ်းဖြတ်ကူတဲ့ အချိန် ချစ်သူရဲ့ ခြေလှမ်းအတိုင်း လိုက်လှမ်းချင်တဲ့ သူ
(၄)ချစ်သူရဲ့ရှေ့ မှာ မလှဆုံး၊ချစ်စရာ မကောင်းဆုံးဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်တတ်သူ
(၆)အချက်အပြုတ် မတတ်ဘဲ မီးဖိုတစ်ခုလုံးကို မွှေနှောက် ချစ်သူကို ကိုယ်တ်ိုင်ချက်ကျွေး
(၇)ဗေဒင် လက္ခဏာတွေတွက် ယတြာတွေ လိုက်ချေပြီး ချစ်သူနဲ့ပေါင်းဖက်ရအောင်လုပ်သူ
(၈)ချစ်သူကို တစ်နေ့ မမြင်ရင် နံရိုးတစ်ချောင်း လျော့နေတယ်လို့ ထင်သူ
(၉)ချစ်သူ မောပန်းတဲ့ အချိန်၊ စိတ်ညစ်တဲ့ အချိန်မှာ ရင်ခွင်ထဲ ထွေးပွေ့ပြီးနှစ်သိမ့် တက်သူ
(၁၀)ပျော်ရွှင်မှုတွေကို နွေးထွေးတဲ့အနမ်းနဲ့ ချစ်သူကို မျှဝေးပေးတက်သလိုစိတ်ညစ်ဝမ်းနည်း
မှုတွေကို မျက်ရည်နဲ့ အတူချစ်သူ ကိုရင်ဖွင့်တက်သူ
(၁)ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်ရှပ်နေပါစေ ကိုယ့်ဖုန်းကို ဖွင့်ထားပြီး သူ့ ဆီကမက်ဆေ့ဒါမှ
မဟုတ်ဖုန်းကိုစောင့်နေမိတယ်ဆိုရင် သူ့ ကို ကိုယ်ချစ်မိသွားလို့ ပဲ။
(၂)သူနဲ့ အတူ နှစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှောက်ရတာကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် သူ့ ကို
(၃)အတူရှိနေတဲ့ အချိန် သူ့ ကို ဂရုမစိုက်ချင် ဟန်ဆောင်နေပေမယ့် ကိုယ့်မြင်ကွင်းထဲ
ကနေ သူပျောက်သွားရင် အပူတပင် လိုက်ရှာတတ်တာ သူ့ ကိုကိုယ်ချစ်မိသွားလို့ ပဲ။
(၄)သူဖျားနာနေရင်၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရလာရင် လိုတာထက် ပိုစိုးရိမ်မိရင် သူ့ ကိုကိုယ်
ချစ်မိ သွားလို့ ပဲ။
(၅)တစ်ခြားလူအပေါ် သူစေတနာပိုမိလို့ကိုယ့် စိတ်ထဲ ကနေ မနာလို အူတိုမိရင်သူ့
့ ကို ကိုယ်ချစ်မိသွားလို့ ပဲ။
(၆)သူ့ ရဲ့ချိုမြမြ အပြုံးတွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းလေးတွေပါလိုက်တွန့်တတ်ရင်
သူ့ ကို ကိုယ်ချစ်မိသွားလို့ ပဲ။
(၇)ဒီစာကို ဖတ်နေချိန်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကိုယ်သတိရနေမိရင် သူ့ကိုကိုယ်ချစ်မိ
မှတ်ချက် - Mail ထဲမှ ကောက်ယူသည်။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Tuesday, December 01, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့
တယ်ဆိုပါတော့။ ခြောက်နေတဲ့အာခေါင်ကိုဆေးကြောဖို့အတွက်ရေဗူး ကိုလှမ်းယူလိုက်တယ် အိုးးးးးးးးး
ပေါ့ရွှတ်နေတဲ့ ရေဗူးတစ်ဗူး လက်ထဲပါလာတယ်။ သွားပြီပေါ့ တံတွေးတွေတောင်ခမ်းနေပြီ။လူကလဲစိတ်
ခြောက်ခြား လို့ကယောင်ကတမ်းနဲ့ပေါ့။စောင်တွေကန်ချပစ်ချင်ပေမဲ့ ကြောက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲကသူ့
မျက်နှာကြီးကိုပေါ့့သူဆိုတာအမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့့ပြီးတော့
ရေ့လို့တိုးတိုးလေးတစ်ခွန်းပြောလိုက်ရုံနဲ့ပဲ ကျွန်တော့်ကို ရေတစ်စက်ချင်းချပြီးတိုင်မဲ့သူတွေဝိုင်းအုံလို့့
သယ်ရင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့ အားရှိလိုက်တာ့တွေးမိလိုက်တာကတော့ “သူမရှိတော့ဘူးးးးးးးး” လိုပေ့ါ့။
အခုကျွန်တော်အိမ်မက်ဆိုးကြီးတစ်ခု သိူ့မဟုတ် အတိတ်ထဲကိုခဏပြန်ရောက်သွားတယ်ထင်ပါတယ့်
နဲ့ဆယ်မိနစ် တိတိ ရေအရမ်းငတနေပေမဲ့ ရေမရှိတဲ့ ရေသန့်ဗူးခွံလေးကိုဖြစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်ထားရင်းးးးနဲ့့
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Thursday, November 26, 2009 in ကျွန်တော့်အကြောင်း
ဖြစ်တဲ့ shanmakalay.blogspot.com ကblogger မမတစ်ယောက်အကူအညီနဲ့ ကျွန်တော်ဘလော့ပြန်ရေးဖို့အကြောင်းပြန်
နောက်ထပ်ဘလော့ဂါတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့ ကျွန်တော်လဲမသိဘူ့း့ရှိချင်မှလဲရှိနေနိုင်မှာလေနော်။ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာရေ
ငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျဆိုသလိုပဲ ဒီနေ့အိမ်ကနေထွက်လာရတာအရမ်းကိုတန်ဖိုးရှိသွားပါတယ်။blogger shyanmakalay ကို
ကောင်းသိတာပေါ့ ကျွန်တော်ဘလော့ စရေးဖြစ်ခဲ့တာ အဖြူရောင်သံစဉ်မှာ DJ ဇာနည် ဆိုပြီးရပ်တည်ဖြစ်ခဲ့တာတွေဟာသူ့ကြောင့်
ပဲပေါ့ ။။။။။။အရင်ကကျွန်တော် shanmakalay.blogspot မှာပဲအချိန်တွေကုန်တတ်ခဲ့တယ့်အဖြူရောင်သံစဉ်ရေဒီယိုကို သူ့ရဲ့ဘ
လော့ကလေးထဲမှာကျွန်တော်စသိခဲ့ရတာ့နောက်ပြီးနောက်ပြီးးးးးကျွန်တော့်ရဲ့ zopia.com ကအလှအပအဆင်တန်ဆာလေး
တွေ ပြီးတော့gtalk ကနေအပူကပ်ပြီးအမြတမ်း zopiaကိုအလှဆင်ခိုင်းခဲ့တာတွေလေ့အဟတ်ဟတ့့်အစုံအစုံပါပဲဗျာ
သူ့ဘလော့လေးကိုသာကျွန်တော်မသိခဲ့ရင် ကျွန်တော်ဟာbloggerတစ်ယောက်လဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့သလို APYTZ ရဲ့
ကျွန်တော်ကသာကြိတ်ပြီးကျေးဇူးတင်နေတာ အဲ့ဒီ အမ ကတော့ကျွန်တော့်ကိုမှတ်တောင်မှတ်မိရဲ့လားမသိဝူး့းအင်းလေး
ထားပါဗျာ့အဲ့ဒီအမ သာဒီpostလေးကိုဖတ်မိသွားမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုမှတ်မိကောင်းမှတ်မိလာနိင်ပါလိမ့်မယ့်
ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ဒီ shanmakalay ရဲ့ gtalk nick name ကလဲပြောင်းသွားတာကိုးးးးးးးးး
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Thursday, November 26, 2009
သယ်ရင်းရဲ့ PC ကိုမြန်ချင်ပါသလား???????
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, August 19, 2009 in နည်းပညာများ
Windows သုံးရတာ နှေးတဲ့ ပြသနာက တော်တော်များ ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်....
ကျွန်တော် လက်ရှိဆက်တင်လုပ်ပြီးသုံးနေတဲ့ "Windows ရဲ့ Performance ကိုမြှင့်သုံးတဲ့ နည်း" လေး ပြောပြပါ့မယ်..
(၁) Windows မှာ သိပ်မလိုအပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ လျှော့ချပါ....
Start-> Control Panel -> ထဲမှ System ကိုဖွင့်ပါ၊
System Properties -> Advanced Tag-> Performance ရဲ့ Setting ထဲကိုဝင်ပါ၊
Performance options--> Visual Effets --> Customs ကိုရွေး ပြီး
အောက်ဆုံး Effects (၃) ခု ကိုပဲ အမှတ်ခြစ်ပြီး ကျန်တာတွေကို Blank ထားပါ။
ပြီးရင် Apply --> OK နှိပ်ပါ။
(၂) Paging Files တွေ အတွက် Virtual Memory ကိုမြှင့်သုံးဖို့ 
အထက်ပါအဆင့်အတိုင်းပြန်သွားပြီး Performance Options-->Advanced ထဲကိုဝင်ပါ၊
အကန့် သုံးခုရဲ့ အောက်ဆုံးအကန့် Virtual Memory မှာ Change ကိုနှိပ်ပါ၊
Virtual Memory ထဲမှာ လက်ရှိ ၀င်းဒိုး တင်သုံးထားတဲ့ ဟာ(ဒ်)ဒစ် ကိုရွေးပြီးဖြစ်နေမယ်၊
Space Available နှင့် အောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Recommended ပမာဏ အတိုင်း
Initial Size(MB) နှင့် Maximum Size (MB) နေရာတွေမှာ ပြောင်းထည့်ပါ၊
ပြီးရင် Set--> OK ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ထွက်ပါ။
(၃) Windows အတက်မြန်ဖို့မလိုအပ်တဲ့ Services တွေနဲ့Start Up ပရိုဂရမ်တွေကိုကိုဖြုတ်ချထားဖို့ .
Start-->Run ဘောက်(စ်) ထဲမှာ msconfig လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ၊
(က)System Configuration Utility ရဲ့ Services ကို ၀င်ပြီး အရင်ဆုံး Hide All Microsoft Services
ကိုအမှတ်ခြစ်ပါ၊(Windows ဟာ Microsoft Services တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ပက်သက်နေလို့မှားမဖြုတ်မိအောင်) ပြီးရင် အထဲမှာ မလိုအပ်ဘူး ထင်တဲ့ Services တွေကို Blank(uncheck)လုပ်ပါ၊
(ခ) System Configuration Utility ရဲ့ Startup ကို ၀င်ပြီး စက်စဖွင့်ဖွင့် ခြင်းရှိသမျှ Run နေတဲ့ Program
တွေကို Blank (uncheck) လုပ်ပါ၊ (windows တက်ပြီးရင်မှ အသုံးလိုမှ ဖွင့်သုံးတာ ကောင်းပါတယ်)။
(ဥပမာ- skype, Gtalk တို့ လို ပရိုဂရမ်တွေ သုံးချင်တဲ့အချိန်မှ ဖွင့် သုံးတာကောင်းပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ကောင်းတာက ဘာမှန်ညာမှန် မသိဘဲ စက်ဖွင့်တာနဲ့လှုပ်ရှားသောင်းကျန်တဲ့ Spyware
တွေ Trojans တွေ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သလို ဘယ်လိုမှ Uninstall (ဖြုတ်ချလို့ ) မရတဲ့ Spyware
programs တွေ ကိုချုပ်ထားပြီးသား ဖြစ်တယ်။ပြီး မှ programs files ထဲ ကနေ Folder တစ်ခုလုံး Delete
အားလုံးပြီးရင် Apply--> Ok နှိပ်ပြီး Restart လုပ်ပါ။
Windows ပြန်တက်လာလို့Message ပေါ်လာရင် Don't Show Me Again လုပ်ပြီး OK နှိပ်ပါ။
(၄) ပြန့် ကြဲနေတဲ့ ဖိုင်အပိုင်းအစ တွေကိုပြန်စုစည်ဖို့Disk Defragment လုပ်ပါ၊
My Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး-->Manage ထဲကိုဝင်ပါ၊
Storage-->Disk Defragment ကိုနှိပ်ပြီး ညာဘက်ခြမ်းထဲက HDD တွေကို တစ်ခုခြင်း
ရွေးပြီး အောက် မှ Analyze အရင်လုပ် ပြီး Disk Defragment လုပ်ပါ၊
(၅) Internet ကိုအသုံးပြုတဲ့ Computer Userတွေ Internet Explorer, Firefox စတဲ့ Web Browser တွေရဲ့
Temporary Files တွေကိုရှင်းဖို့ မေ့နေတတ်ကြတယ်။
Internet Explorer ကိုရှင်းဖို့ 
Start-->Control Pannel--> Internet Options ကိုသွားပါ၊
General ထဲမှ Temporary Internet Files မှ Delete Cookies Delete, Delete Files လုပ်ပါ၊
ပြီးရင်ဘေးက Setting ထဲကိုဝင်ပြီး Amount of Disk space to use ကို 25 MB လောက်ပဲထားပါ၊
OK နှိပ်ပြီး Internet Options ရဲ့ နောက်ဆုံး Tag ဖြစ်တဲ့ Advanced ကိုသွားပါ၊ Steeings အောက်ထဲက
Security နေရာ မှာ Empety Temporary Internet Files Folder when Internet Browser is closed ကို
ရှာပြီး အမှတ်ခြစ်ပါ။(Internet Browser ကိုပိတ်ပြီးတာနဲ့Temporary Files တွေကိုဖျက်ပြီးဖြစ်အောင်လို့ ပါ)
ပြီးရင် Apply--> OK နှိပ်ပါ။
Firefox အတွက် ကတော့ Tools ရဲ့ အောက်မှ Clear Private Data လုပ်ရင် ရပါပြီ။
အဲဒီ အချက် (၅) ချက်လောက် လုပ်ရင် စက်ရဲ့Performance ဟာ အလွန်ကောင်းတဲ့အနေအထား ဖြစ်သွားပြီး သုံးရတာ မြန်ဆန်သွက်လက်နေပါမယ်။
ကျွန်တော် ပြောပြတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ အမှားအယွင်း ရှိရင် ထောက်ပြဝေဖန်ပေးပါ ခင်ဗျာ.....
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Tuesday, August 18, 2009 in ကဗျာ
ရေးဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့တာမို့့ကဗျာမဟုတ်သော ကဗျာလေးဖြစ်သွားတာပါ့
၁၄၉၉ မေတ္တာတွေနဲ့ တစ်ချိန်က "ကို"
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Monday, August 17, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့
၁၅၀၀ အချစ်တွေကို တစ်လျှော့ချပစ်လိုက်ရတဲ့ ဘဝရာဇဝင်လေးတစ်ခုပေါ့့
ကိုငါတမ်းတမိတိုင်းနင့်ပုံရိပ်လေးကိုမြင်ယောင်မိတိုင်း နင့်အသံလေးကိုငါကြားယောင်မိတိုင်း နင့်ကိုငါ
အရမ်းသတိရတယ် အရမ်းလွမ်းတယ်ဟာ့တကယ်တော့အလွမ်းဆိုတာဟာ ပူလောင်လွန်းလှပါလား
ယောက်မှာ မမျှတတဲ့ကံတရားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဝေးခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာကိုတွေးမိတိုင်း ငါအခုထိfeel
အဟတ်ဟတ့်ရယ်ရတယ် ဒေး ရာ့အချစ်ဆိုတဲ့သံယောဇဉ်ကိုမြဲလာအောင်လုပ်ယူ ခဲ့ကြတဲ့ငါတို့နှစ်
ယောက်လုံးဟာ ကံတရားကြောင့်ဝေးသွားခဲ့ကြရင်ဆိုတာကိုဘာလို့များမတွေးမိကြတာပါလိမ့့့်ဖုန်းတွေ
မယ်ဆိုတာသာကြိုသိခဲ့ရင် နင့်ကိုငါခိုးပြေးခဲ့တယ်သိလား ဒေ့း့နင်ရောအခုငါ့လိုပဲတွေးနေမလား?????????
အုံးမှာဟ့အခုတော့ ငါ့မှာရယ်ဖို့မပြောနဲ့ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေကိုတောင် အံကြိတ်ပြီးပြုံးနေရတယ်ဟာ့
တယ် ဒေး ရယ့်
ငါ့ရဲ့အိမ်ထောင်ဦးစီး ၊ အိမ်ဦးနတ်ဆိုတဲ့အရိပ်အောက်မှာခိုလှုံခွင့်ပေးမဲ့အမျိုးသမီးမျိုးဟာ ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့အမျိုး
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Saturday, August 15, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့
လူတစ်ယောက်ဟာ ချောက်ထဲကျတော့မဲ့ မြည်းတစ်ကောင်ရဲ့အမြီးကို ဆွဲပြီးချောက်နှုတ်ခမ်းပေါ်
ကိုဆွဲတင်ဖို့ ကြိုးစားနေသတဲ့..။ ဒါပေမဲ့...မြည်းကလည်း ကြောက်လန့်တကြားရုန်းကန်နေတော့
သူပါ ချောက်ထဲကျမလိုဖြစ်နေတာကြောင့် ဆွဲမတင်ဖြစ်တော့ပဲနောက်ဆုံးမှာ လွတ်ချလိုက်ရသတဲ့.....။
“ တကယ်တော့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရတယ်ဆိုတာ တစ်ခုလုံးကို ရတာ မဟုတ်ဘူး...လေ ။ ”
ကောင်းကင်ကြီးက မှုန်မှိုင်းနေလိုက်တာ။ လ၀န်းသော်တာနဲ့ သူ့ကို ၀န်းရံခစားနေတဲ့ ကြယ်လေးတွေလည်း မိုးသားတွေကြောင့် ကွယ်ပျောက်နေရရှာ။ ဒီအချိန်လေးမှာပဲ ကောင်လေးတစ်ယောက် မှိန်ပြပြ မာကျူရီမီးလုံးအောက်က ပေတစ်ရာလမ်းပေါ် ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျလို့ လျှောက်လှမ်းနေလေရဲ့။ ဒါဆိုရင်တော့ သူ့ ရင်ထဲမှာ ဘာခံစားချက်တွေများ ရှိနေပါလိမ့်။ အင်း........... သူ့ခံစားချက်တွေကို မိုးနတ်ဒေ၀ါက သိသွားလို့နဲ့ တူပါရဲ့ နှင်းမိုးလေးတွေ တဖွဲဖွဲ ရွာချပေးလိုက်တယ်။ သူ့လက်ထဲမှာလည်း
လက်ကိုင်ပုဝါလေးတစ်ထည်နဲ့ မိုးရေထိလို့ မင်တွေ ပြန့်နေတဲ့ စာခေါက်လေးတစ်ခု။ ပြီးတော့......... မိုးက အငြိုးတကြီးရွာလာ
သလို ကောင်လေးလည်း မိုးနဲ့အပြိုင် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုချလိုက်တော့တယ်။ နှုတ်ကလည်း " ရင်ထဲက မိုး၊ ရင်ထဲက မိုး " ရယ်
ဆိုပြီး ရေရွတ်နေလိုက်တာ။ ဒါဆိုရင်တော့ သူ အသည်းကွဲနေတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ၊ ကျွန်တော့် အသည်းကွဲနေတာပါ။ ကျွန်တော့်နာမည်က " မာန်"။ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေးနာမည်က " မိုး "။ မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းလို မဆုံနိုင်တဲ့အဖြစ်က ဒီလို.......................
ကြည်လင်သာယာနေသော ကောင်းကင်ကြီးအောက်မှာ အပူအပင်ကင်းစွာ " မိုး " နဲ့ " မာန် "တို့ ပျော်ရွှင်စွာ ကစားနေကြတာပေါ့။
မိုး။ ။ ငါတို့ ဘာကစားနည်း ပြောင်းကစားရင် ကောင်းမလဲ။
မာန်ကလဲဟာ အိုးပုတ်၊ ချုိးရုပ်တမ်း ကစားရတာ ကောင်းရဲ့သားနဲ့။ ဘာလို့ ပြောင်းကစားချင်ရတာတုန်း။
အာ....... ဒါ မိန်းကလေးတွေ ကစားတဲ့နည်းဟ၊ ငါ မကစားချင်တော့ဘူး။
အောင်မယ်၊ နင်ကများ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဘာကစားနည်း ပြောင်းချင်ရပြန်တာလဲ။
ငါ ကုလားမစည်း နင်းချင်လို့ဟ။
မာန်ရယ်၊ စဉ်းစဉ်းစားစားလည်း ပြောပါဦး။ ဒါလည်း မိန်းကလေးပဲ ကစားရတဲ့ဟာကို။
အာ....... မသိဘူးဟာ၊ ငါ အဲ့ဒါပဲ ကစားချင်တယ်၊ ကစားမှာလား၊ မကစားဘူးလား၊ ပြော....... ။
အေး..... အလျှော့ပေးပါတယ်၊ မာန်ရယ်။ နင် စည်းဆွဲရင် ငါကစားမယ်။
ဒါဆို ငါက စည်းဆွဲရတော့၊ ငါ အရင် စကစားမယ်။ သဘောတူလား။
အေးပါ၊ ငြင်းရင် မကစားဘူးနော်။
အေးပါ၊ မငြင်းဘူး၊ ကတိပေးပါတယ်၊ မိုးရယ်။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကစားရင်း မောလာတော့..................
တော်ပြီ မာန်၊ ခုန်ရတာ မောနေပြီ၊ မကစားတော့ဘူး။
အေး..... ဟိုနားက မြက်ခင်းပြင်ကြီးပေါ် သွား အမောဖြေကြတာပေါ့ဟာ။
မိုး၊ ကောင်းကင်ကြီးက အရမ်းလှတာပဲနော်။
အောင်မယ်၊ နင်ကများ အလှအပတွေ ခံစားနေတတ်လိုက်တာ၊ အခုမှ လူကောင်က လက်တောက်လောက်လေးရှိသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် နင်ပြောသလိုပဲ ကောင်းကင်ကြီးက လှတယ်။
မိုး၊ နင်နဲ့အတူ ဒီကောင်းကင်ကြီးရဲ့အောက်မှာ ဒီလိုပဲ အမြဲတမ်း နေသွားချင်တယ်၊ နင်ရှိရင် ငါပျော်တယ်။
ငါလည်း နင်ရှိရင် ပျော်ပါတယ်၊ မာန်ရယ်။
ဒီလိုနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ ကလေးဘ၀ ဖြတ်သန်းရင်း ကျောင်းသွားအတူ၊ ကစားအတူ နေလာကြတာပေါ့။ မိုးက အတန်းထဲမှာ အမြဲ
အဆင့် ၁ ရသလို ကျွန်တော်က မိုးရဲ့နောက်က အဆင့် ၃၊ ၄၊ ၅ နဲ့ပဲ ၀ဲချာလည်လိုက်နေတယ်။ အဲ......... ၃ တန်း ကျောင်းသား
ဘ၀မှာ မှတ်မှတ်ရရ အဖြစ်အပျက်လေးရှိတယ်။ အတန်းထဲမှာ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး ခွဲထိုင်ရပေမယ့် ကျွန်တော်ရယ်
မိုးရယ် က နောက်ဆုံးတန်းလေးမှာ အတူတူ ထိုင်တာကို ဆရာမက ခွင့်ပြုတယ်။ ဒီလို စာအတူလုပ်၊ အတူကစား၊ အတူထိုင်
တာကို တချို့ နှစ်ကျ ကျောင်းသားတွေက ကြည့်မရဘူး။ တစ်နေ့မှာတော့...............................
မိုး၊ စာအုပ် သွားထပ်မလို့၊ နင့်စာအုပ်ပါပေး၊ ငါ ထပ်ပေးမယ်။
ဆရာမဆီ သွားထပ်ပြီး အပြန်မှာ ကျော်ဦးဆိုတဲ့ကောင်က..............
ဟေ့ကောင် ကောင်မလေးနား အမြဲဘူးနေတဲ့ ၂၄ နာရီ နှာဘူး။
ဒေါသတွေ ထွက်လိုက်တာဗျာ။ အသားတွေတောင်တုန်တယ်။ လက်တွေကလည်း ဒေါသနဲ့အတူ ကျော်ဦး မျက်နှာပေါ် ဗြောင်း
ခနဲ ရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်ကို တစ်တန်းလုံးက ၀ိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကျွန်တော် မျက်
ဆရာမ ။ ။ မာန်နဲ့ ကျော်ဦး၊ လာဦး၊ ဘာဖြစ်ကြတာလဲ။
ကျော်ဦး ။ ။ သူ..... သူ ကျွန်တော့်ကို ရိုက်တယ်၊ ဆရာမ။
မာန် ။ ။ သူ ကျွန်တော့်ကို ၂၄နာရီ နှာဘူးလို့ ပြောလို့ ဆရာမ။
ဆရာမ ။ ။ ဒါဆို နှစ်ယောက်စလုံး မှားတယ်။ ကဲ......... ကျော်ဦး သားက သူများ မကြိုက်တာကို သွားစတဲ့အတွက် နှစ်ချက်
ရိုက်မယ်။ နောက်.. သူများ မကြိုက်တာ မစရဘူးနော်။ နောက်တစ်ခါ ဒီ့ထက် နာမယ်။ ကြားလား။
မာန်... သားက ဘာလို့ လက်တုန့်ပြန်ရတာလဲ။ ဒါကြောင့် တစ်ချက်ရိုက်မယ်။ နောက်တစ်ခါ ဒီလို မလုပ်ရဘူးနော်။ ဆရာမ
ကို လာတိုင်၊ ဟုတ်ပြီလား။
မာန် ။ ။ သား.... သား စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ ဖြစ်သွားတာပါ ဆရာမ။
မိုး နားမှာ ပြန်ထိုင်တော့..................
မာန် နင်က ရိုက်ပြီး ငိုနေသေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။
မပြောတတ်ဘူးဟာ၊ ငါ တော်တော်ဒေါသ ထွက်သွားတယ်။ ငါ့ လက်ကို ကိုင်ကြည့်ပါလား။
အေးဟ၊ တုန်နေတာပဲ၊ နင်က စိတ်ဆိုးမယ် ကြံရင် ဒေါသကို ရှေ့က ထားတာကိုးဟ.... ခစ်.. ခစ်ခစ် ။
မိမိုးမ နင်က ရယ်တယ်၊ ဟုတ်လား။ ငါ့ ဒေါသတွေ နင့်ဆီ ရောက်ကုန်မယ်နော်၊ ဟွန်း.............
အောင်မလေး၊ မလုပ်ပါနဲ့ ကိုဒေါမာန်ထကြီးရယ်၊ ငါက နင့်ကို ချစ်လို့ စတာပါဟ။
ဘာ............ ချစ်လို့.......... ဟုတ်လား။
ပျော်ရွှင်စွာနေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းရင်း လေးတန်းအောင်စာရင်းထွက်တဲ့နေ့ ကျွန်တော်နဲ့ မိုး ကျောင်းမှာ ဆုံမိကြတယ်။
မာန် နင်လည်း အောင်တယ်။ နင်နဲ့ ငါ ကျောင်းခွဲတမ်းတူမှာဟ။
ငါ့ကို ငါ့အစ်ကိုတွေ တက်တဲ့ကျောင်းမှာ တက်ရမယ်တဲ့။ ငါတော့ နင်နဲ့ မခွဲပဲ ကျောင်းအတူတူ တက်ချင်သေးတယ်ဟာ။
ဒါဆို နင်နဲ့ငါ ခွဲရတော့မှာပေါ့။ ဒါဆို နင် ငါ့ကို သတိရရင်ကြည့်လို့ရအောင် ငါ့ လက်ကိုင်ပုဝါလေး ပေးလိုက်မယ်။
ငါလည်း နင့်ကို ဖောင်တိန်ပန်လေး ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဟာ။ ငါ့ကို သတိရရင် ထုတ်ကြည့်ပေါ့။
အမှတ်တရပစ္စည်း ကိုယ်စီ လဲပြီးနောက် ခွဲခွာသွားလိုက်ကြတာ တစ်ခါ နှစ်ခါသာ ဆုံဖြစ်ကြတော့တယ်။
ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းသစ်တွေနဲ့ နေသားတကျ ဖြစ်သလို မိုးလည်း သူ့သူငယ်ချင်းသစ်
တွေနဲ့ နေသားတကျ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်နေမိတယ်။ မိုးတွေ ရွာတိုင်း မိုးကို သတိရသလို မိုးရေထဲမှာ လမ်းလျှောက်
ရွက်ဟောင်းတွေ အခါခါကြွေသလို ရွက်သစ်တွေလည်း အခါခါ ဝေကြပြီး နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်းရာသီတွေ အလီလီ ပြောင်း
လာလိုက်တာ ကျွန်တော် ဆယ်တန်း စာမေးပွဲကြီးကို နှစ်ချင်းပေါက် အောင်မြင်ခဲ့တယ်။
ပေတေလွန်းတဲ့ ကျွန်တော် အမှတ်လည်း မကောင်းတဲ့အတွက် ဥပဒေမေဂျာနဲ့သာ တက္ကသိုလ် ဆက်တက်ဖြစ်သလို
ကျွန်တော့် ရင်ထဲက မိုးဟာလည်း GTC ( Civil ) ကို လားရှိုးမှာ တက်နေလေရဲ့။
အင်း.......... တက္ကသိုလ်မြေကြီးဟာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် ဘ၀ပန်းတိုင်ဖြစ်သလို အချစ်ပန်းတွေ ဖူးပွင့်တဲ့
နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူများ သမီးရည်းစား အတွဲတွေ မြင်ပြီး ကျွန်တော့် ရင်ထဲက ငုံနေတဲ့ အချစ်ပန်းလေးတွေဟာ
လည်း ဖူးပွင့်လာပါတော့တယ်။ လှုပ်ရှားလာတဲ့ နှလုံးသားရဲ့အလိုအရ မိုးကို ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ခုချိန်လောက်ဆို မိုးရဲ့ နှလုံးသားမှာလည်း အချစ်ပန်းတွေ ဝေဆာနေမှာ ဧကန်မလွဲဘူး။
ကျွန်တော် မိုးကို နောက်ပိုးဖို့ ပြင်ဆင်မိတယ်။ ပထမဆုံး ကျွန်တော် သူ့ ကို သွားလေ့လာတဲ့အခါ လားရှိူးတက္ကသိုလ်နား
မှာ တစ်ပတ်ကို ငါးရက် အဆောင်နေ ကျောင်းတက်လုပ်ပြီး စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ပြန်လာရင်လည်း အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်ဘူး။
ထွက်ပြန်ရင်လည်း သူ့အမေက အမြဲပါနေတော့ ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့။ လှုပ်ရှားဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ကျောင်းတက်ဖို့
အဆောင်ပြန်တဲ့အခါ လိုက်သွားဖို့ပဲ။ဒါနဲ့ ကျွန်တော်မိုးကို ပေးဖို့ ရည်းစားစာရေးဖြစ်တယ်။
မိုးတွေ ရွာတိုင်း မိုးကို သတိရတယ်။
မိုးဆိုတာ အေးမြခြင်း မဟုတ်လား။
ကိုယ့် ရင်ထဲမှာ အချစ်မီးတွေ တောက်လောင်နေတယ် မိုးရယ်။
မိုးရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ငြိမ်းသတ်ပေးမှသာ ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဝေဒနာတွေ ပျောက်မှာပါ။
ကိုယ်လေ မိုးကို အရမ်း ချစ်တယ်။
အရမ်းရိုစင်းပြီး ထိရောက်မယ်လို့ ထင်တယ်။ အင်း........... မိုး တနင်္ဂနွေနေ့ အဆောင်ပြန်မှာပဲ။
မိုးထွက်အလာကို မိုးတို့ အိမ်နားက စောင့်နေမိတယ်။ မိုး အမေနဲ့ ထွက်လာပြီး ကားဂိတ်သွားတော့ ကျွန်တော်လည်း မိုးတို့ တက်တဲ့ ကားပေါ်ကို လိုက်တက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကားဂိတ်ရောက်ကိုလာတာပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ရဲ့အကို ကိုမင်းမင်းနဲ့ တွေ့ရော။ ဘယ်သွားမလို့လဲ မေးတော့ ကွိုင်ပဲ ဘယ်လိုဖြေရမလဲ မသိဖြစ်နေချိန်မှာ မိုးကို သူလှမ်းမြင်သွားတယ်။ သူကလည်း မိုးနဲ့ တစ်လမ်းတည်း နေတဲ့သူ။ သူ ရိပ်မိသွားပြီးတော့
ဟား....... ဟား.........မင်း မိုး နောက် လိုက်လာတာ မဟုတ်လား။
အေး...... ငါလည်း တက္ကသိုလ်ဖက်သွားမှာ၊ အတူတူ သွားကြတာပေါ့ကွာ။
ကျွန်တော် ပျော်လိုက်တာဗျာ။ အိတ်ကပ်ထဲက ရည်းစားစာကို စမ်းကြည့်တော့ ရင်တွေ ခုန်နေလိုက်တာ။
ကားဂိတ်ရောက်တော့ကျွန်တော်အရင်ဆင်းလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့် ရင်တွေပိုခုန်လာတယ်ဗျ။ မိုးအောက်ကိုရောက်တော့
ထီးဖွင့်လိုက်ရော မိုးနဲ့ သက်တူရွယ်တူကောင်လေးတစ်ယောက်ကလာကိုင် ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်။ ပြီးတော့ ထီးအတူတ
ူဆောင်းပြီးသွားတာကို တွေ့လိုက်ရော ကျွန်တော် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကျွန်တော့် ပျော်နေတဲ့ စိတ်တွေဟာ ရေပွက်တွေလို
ဒါနဲ့ အပြန်လမ်းမှာ အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုပြီး စဉ်းစားရင်း ခေါင်းတွေတောင် မူးနောက်လာတယ်။ အရေးအကြောင်း ဒိန်းဒေါင်းဖျက်သလို လမ်းမှာ ကားက ပျက်နေသေးလေရဲ့။
ဟင်.......... မိုးရိပ် မိုးသားတွေ တက်လာပါလား။ သတိရလိုက်တာ မိုးရယ်။
အို........... နှင်းမိုးလေးတွေပါ ကျလာပါလား။ ပိုပြီးတော့ ခံစားရလာပြီဗျာ။
မိုးက ပိုသည်းလာတယ်။ မိုးက ကျွန်တော့်ကို လှောင်ရယ်နေတာလားလို့တောင် တွေးမိတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ လက်ကိုင်ပုဝါလေးနဲ့ စာကို လက်ထဲမှာ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်မိတယ်။
မျက်ရည်တွေဟာ မိုးနဲ့အတူ စီးကျကုန်ပြီး ချစ်သ၀ဏ်လွှာလေးဟာလည်း မင်တွေ ပြန့်ကုန်ပြီ။
မာကျူရီမီးလုံးများအောက်မှာ သည်းနေတဲ့ မိုးနဲ့အတူ ရှိုက်ကြီးတငင်ငို မိတယ်။
နှုတ်ကလည်း ရင်ထဲက မိုး၊ ရင်ထဲက မိုး ရယ်လို့ ရေရွတ်ရင်း
ပေးဆပ်ခြင်းလား ဆိုတာ........... ချာချာလည်ရင်း.......................။
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, July 22, 2009 in ဒီလိုပဲပေါ့
အပြင်မှာ မိုးတွေက တဖွဲဖွဲကျဆင်းနေသည်။ ကျောင်းသားများအားလုံးကား အတန်းရှေ့မှ ဟန်ပါပါသင်ကြားနေသော ရူပဗေဒဆရာ၏ အသံစူးစူးထံသို့သာ အာရုံစိုက်လျက်။ ထိုအခိုက်တွင် အရာအားလုံးဆိတ်သုန်းသွားသည်၊ ဆရာ၏မျက်လုံးသည်ကား အံ့သြစွာဖြင့် အတန်းအနောက်ဆုံးမှ ၀င်ပေါက်ဆီသို့…….. ကျောင်းသားများအားလုံးသည်လည်း မဆိုင်းမတွပင် တစ်နေရာတည်းသို့ လှည့်ကြည့်ကြကုန်၏။
မတ်တူးကားအဖြူတစ်စီးကား မောင်းထွက်သွားပြီ၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည်လည်း လက်ညိုးကလေးကိုထောင်လျက်တစ်လှမ်းခြင်းလျှောက်ဝင်လာ၏။ အရာအားလုံးသည်ကား ခေတ္တမျှ ရပ်ဆိုင်းကုန်၏။ ပြန်လည်အသက်ဝင်စေသည်ကား ဆရာ၏အသံတည်း……
(( လပ်နေတဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေသလိုထိုင်လိုက်ပါ ))
အားလုံးကတော့ ဆရာကိုမကြည့်တော့ပေ။ ထိုထို မိန်းကလေးဆီသို့သာ၊ အမှန်တကယ်ပင် ထိုကာလက မီနီဂျင်းစကတ်တိုဝတ်လျက်၊ စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်ကို ဇာလွှာအင်္ကျီ ထပ်ထားသောမိန်းကလေး၏အလှတရားကား…….(( ခေတ်စကားဖြင့် အရမ်းလန်ထွက်နေတယ်))လို့ ပြောရုံပင်အားမရနိုင်ပါ။
သူမကား ကျွန်တော့် အရှေ့တန်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်၊
(( အား… ))
(( ဆောရီး)) ဆိုသည့်စကာကိုသာ အားမရစွာမြိုချခဲ့ရသည်.. စိတ်ထဲမှာတော့သိမ်မကြည်လှ။
အတန်းထဲက ယေက်ျားကလေးများစွာကတော့ ခိုးခိုးကြည့်လျက်။ သိမ်ချစ်စရာကောင်းသည်တဲ့…အဘယ်ကိုဆိုသည်နည်း။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့မေးမိသည် ဘာမှန်းတော့မသိ..ကျွန်တော်သိသည်ကား ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိသော ကျွန်တော်၏တစ်ခုတည်းသော ခဲတံလက်တစ်ဆစ်။ ဆရာကလည်းပုံလိုက်ဆွဲရန်ပြောနေပြီ..ဆွဲစရာခဲတံကားမရှိ။ ကျွန်တော်သည်ကားကျောင်းသွားလျင် ခဲတံတစ်ချောင်းနှင့် ဗလာစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုသာယူသွားတက်သည်။ ခက်ချေပြီ။ ခဲတံက အပိုမရှိတော့။ ဟိုလှန်သည်လှန် စာအုပ်ကိုလှန်သည်..ဟိုငုံ့ သည်ငုံ့ ခုံအောက်သို့ငုံ့ကြည့်သည်..ဟိုရှာသည်ရှာ လုပ်သည်။ သူမက မျက်ထောင့်နီကြီးနှင့်် လှည့်ကာ လှည့်ကာကြည့်သည်။ ကျွန်တော်သည်လည်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်နေပြီ သူမသည်လည်းအရှေ့မှ ဂနာမငြိမ်တော့။ သူမကား သင်္ကာမကင်းသည့်နှယ် ခိုးခိုးကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော်သည်လည်း သဲသဲမဲမဲရှာနေဆဲ။ မိန်းမတစ်ယောက်၏ သင်္ကာမကင်းသောအကြည့်သည် ခွေးချေးပုံတက်နင်းမိသည်နှယ် နေရခက်ချေသည်။ ဆရာကလည်းလှမ်းပြီးကြည့်သည်။ ကျွန်တော် ဇောချွေးများပြန်နေပြီ ဆရာအထင်လွဲတော့မည်။ စာလိုက်ရေးသည်နှယ် ငြိမ်ငြိမ်ကလေးနေလိုက်သည်။ ရင်ထဲမှာတော့ ကလိကလိဖြစ်နေပြီ။
ဟော..တွေ့လေပြီ…ဒါမှတကယ့်ပြသနာ။ ကောက်မရ နှိုက်မရသည့်နေရာမှာ ဒင်းကရောက်နေပြီ။ အဆုံးခံလိုက်ရုံသာ ရှိခြေပြီ။ သို့မဟုတ်ပါက ပါးအစိတ်စိတ်ကွဲနိုင်သည်။ အတွင်းခံမပေါ်တပေါ် ရှိနေသော မိုးပြာရောင် ဂျင်စကတ်တိုနှင့် ခါးစပ်ဖွေးဖွေး အကြား နေရာလပ်သို့ ဒင်းက ဘယ်သို့ဘယ်ပုံနေရာယူထားသည်မသိတော့….။
ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။ ပုံလည်းလိုက်ဆွဲလို့မမှီတော့။ အငြိမ်မနေလျင် ဆရာကဆူတော့မည်။ ကျောင်းကလည်းလွှတ်တော့မည်။ ပြောလို့လည်းမရနိုင်။ တစ်နှစ်လုံးသုံး တစ်ချောင်းတည်းသောခဲတံ..နှမြောစွ။ ထိုတစ်နေ့က ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရရှိခဲ့သည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ အကြည့်ခိုး။ ပြန်မရတော့ဟုယူဆလိုက်ရသည့် ခဲတံ။ မကူးလိုက်ရသော စာမေးပွဲမှာမေးလာမည့် ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်။
INTERNET DOWNLOAD SPEED မြန်စေရန်
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, May 20, 2009 in စေတနာနဲ့ပါ
ဟုတ်ကဲ့အင်တာနက်ကို မိုဘိုင်းဖုံးတွေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေကောကော်နက်ရှင်ကျနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီပို့ စ်လေးကို
registry ပြင်ပြီးအင်တာနက် Download Speed ကိုမြန်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးပါ
Enter နိပ်ပါ ..
HKEY_LOCAL_MACHINE\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Servic es\_ Tcpip\_Parameters ကို ဖွင့်ပါ ...
အောက်က ဟာကို ပေါင်းထည့်ပါ ။
ပြီးရင်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပြီး စမ်းကြည့်ပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ့်
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Monday, May 18, 2009 in သားသမီးတွေရဲ့မိဘ
အသက်၈၀အရွယ် အဘိုးအိုနှင့် အသက်၄၅ နှစ်အရွယ် ပညာတတ် သားဖြစ်သူတို့ ဧည့်ခန်းတွင်းရှိ ဆိုဖာတွင်
ထိုင်နေကြစဉ် ရုတ်တရက် ပြတင်းတံခါးပေါက်သို့ ကျီးကန်းတစ်ကောင် လာရောက်နားလေသည်။ အဲဒီအခါမှာ
အဖေဖြစ်သူက အဲဒါဘာကောင်လဲ လို့မေးသော အခါမှာ သားဖြစ်သူက အဲဒါကျီးကန်းလေ ဟုဖြေဆိုလေသည်။
နောက်မိနစ် အနည်းငယ် အကြာမှာ အဖေဖြစ်သူ အဘိုးအိုမှ အဲဒါ ဘာအကောင်လဲဟု ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မေး
လေသည်။ ဒီအခါမှာ သားဖြစ်သူမှ အဖေကလည်း အခုလေးတင်ပဲ ကျီးကန်းပါလို့ သားပြောပြီး ပြီလေဗျာ။
နောက်ခဏနေတော့ အဖေဖြစ်သူ အဘိုးအိုက တတိယ အကြိမ်အဖြစ် အဲဒါဘာ အကောင်လဲ ဟု ထပ်မေးလေ
သည်။ ဒီတွင်တော့ သားက ဒေါသသံဖြင့် အဖေဖြစ်သူကို အဲဒါကျီးကန်းလို့ ခေါ်တယ် လို့ အသံမာမာဖြင့် ပြော
နောက်ခဏနေတော့ အဖေက သားအား အဲဒါ ဘာကောင်လုိ့ ခေါ်လဲဟု လေးကြိမ်မြောက် မေးမြန်းလေသည်။
အဲဒီမှာ သားဖြစ်သူက ဒေါသဖြင့် အဖေ၊ ဘာလို့ ဒီမေးခွန်းကိုပဲ ခဏခဏမေးနေတာလဲ။ အဖေ့ကို ကျွန်တော်
ဘယ်နှခါ ဖြေရမလဲ ကျီးကန်းလို့ ခေါ်တယ်။ အခုချိန်ထိ အဖေနားမလည်ဘူးလား။ မှတ်မထားဘူးလား စသည်
ခဏနေတော့ အဖေက အိပ်ခန်းထဲသို့ ၀င်သွားပြီး သားမွေးဖွားလာတဲ့ နေ့မှစပြီး မှတ်တမ်းအဖြစ် သိမ်းဆည်း
ထားတဲ့ ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြဲနေပြီ ဖြစ်တဲ့နေ့စဉ်ရေး ဒဏ္ဍရီ လေးကိုထုတ်လာလေသည်။ စာအုပ်ဟောင်းလေးမ
ှ စာမျက်နှာ တစ်ရွက်ကို ယခု အသက်၄၅ နှစ်အရွယ် သားဖြစ်သူကို ဖတ်ခိုင်းလေသည်။ သားဖြစ်သူ ဖတ်လိုက်
ဒီနေ့ သုံးနှစ်အရွယ် ကျွန်တော့်သားငယ်လေး နဲ့ကျွန်တော် ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်နေတုန်း ကျီးကန်းတစ်ကောင် ပြတင်းမှာ
လာနားနေတယ်။ကျွန်တော်သားက အဖေလို့ခေါ် ပြပြီး အဲဒါဘာကောင်လဲ ဖေဖေလို့ ၂၃ ခါတိတိ မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်
ကလည်း ၂၃ ခါလုံးကို ဖြေလိုက်တယ်။ သားစကား သံလေးနဲ့ ပီတိဖြစ် ၀မ်းသာကြည်နူး နေရတဲ့ ကျွန်တော်လေ သား
မေးတာကို မမောမပန်း ၂၃ ခါလုံးလုံး ဖြေကြားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ စကားအလွန် တတ်လှတဲ့ သားလေးမေး သမျှ
ကို စိတ်ဆိုးခြင်း စိတ်မရှည်ခြင်း မဖြစ်ဘဲ အပြစ်ကင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားငယ်လေးကို ပိုက်ထွေးလိုက်ပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ၂၃ခါလုံး အဲဒါ ဘာအကောင် လို့ခေါ်လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မိဘဖြစ်သူမှ စိတ်တိုခြင်း ကင်း
ပြီးဖြေကြား ခဲ့ပေမယ့် အခုဒီနေ့တော့ အဖေဖြစ်သူက တူညီတဲ့ မေးခွန်းကိုပဲ ၄ကြိမ်လောက်လေး မေးတာကို သား
ဖြစ်သူက ဘာကြောင့်စိတ်ဆိုး စိတ်ကတိ ကအောက် ဖြစ်ရသနည်း။
အကယ်၍များ မိဘများ အသက်အရွယ် အိုမင်းလာချိန်မှာ သူတို့ကို မလိုလား မနှစ်မြို့ခြင်း မဖြစ်ဘဲ ၀န်ထုတ်တစ်ခုကို
စောင့်ရှောက်သကဲ့သို့ သူတို့ကို ပြန်လည် စောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စကားပြောတဲ့ အခါမှာလည်း ငြိုငြင်ခြင်း
ကင်းပြီး ချစ်ခင်ဖွယ် သာယာဖွယ် စကား၊ စိတ်ချမ်းသာ ဖွယ်စကား၊ ရိုသေကျိုးနွံခြင်း၊ နှိမ့်ချခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း အပြည့်
နဲ့ ပြောဆိုသင့်ပါတယ်။ မိဘများဟာ သားသမီးတွေ ငယ်စဉ်ထဲက အခုချိန်ထိ ဂရုစိုက်မှုတွေ မပြတ်ကြ သေးပါဘူး။
သူတို့ကိုယ်ကျိုးကို မငဲ့ကွက်ဘဲ သားသမီးတွေ အပေါ်မှာ မေတ္တာတွေ စီးဆင်းဆဲ စီးဆင်းလျှက်ပါ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း တခါတခါ စိတ်မရှည်ပါဘူး ။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ်မှာလဲ စိတ်မရှည်ခဲ့ဘူး။ တခါတခါ
ကိုယ့်မိဘ အပေါ်တောင် အဲလို စိတ်မရှည်တော့ ပြန်လည်းပြောမိပါတယ်။ တခုခုဆိုရင်.... ဟာ.. မေကြီးကလည်း ၊
ဟာ... ဖေကြီးကလည်း ဆိုပြီးစိတ် မရှည်သလို ဖြစ်ခဲ့မိပါတယ်။ မိဘအပေါ် ရိုင်းဆိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဆိုးလို့ရ
ကြီးလာတဲ့ အခါကြတော့ အသိတရားနဲ့ ပြည့်စုံလာ တဲ့အခါ အရာရာ ပြောင်းလဲသွား ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း
ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုးခဲ့တဲ့ ကလေးက ကြီးလာတဲ့အခါ သူမတူအောင် လိမ္မာသလိုပေါ့(ဟိဟိ...
ကိုယ်ကိုကိုယ် အဲလိုလေးလဲ ပြန်ပြောပေးဦးမှ...နော်.. :P ) ပြောချင်တာက ပြောင်းလဲသွား၊ ပြုပြင်ယူလို့ ရတာကိုပါနော်။
ကဲ..မိတ်ဆွေ!! သင်ရော..... သင့်မိဘ အပေါ်မှာ စိတ်တိုခြင်း၊ စိတ်မရှည်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသလား? ဖြစ်ခဲ့ဖူးရင် နောက်မ
ကျ သေးပါဘူး မိတ်ဆွေ။ သင်သိတဲ့ အချိန်က စပြီးပြန်လည် ပြုပြင်လို့ အချိန်ရနေ ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် အခုပဲ ငါသည် ယခုအချိန် မှစ၍ ငါ့မိဘများကို စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်စေရမည်၊ ငါ့မိဘများ ဘယ်လောက်ပဲ
အိုမင်းမစွမ်း ရှိနေပါစေ ငါ့မိဘကို တစ်ဖန်ပြန်လည် ပြုစုလုပ်ကျွေး စောင့်ရှောက်ကာ ကောင်းမွန် မြင့်မြတ်သောလမ်း
ကို ငါလျှောက်ခြင်းဖြင့် သားလိမ္မာ၊ သမီးလိမ္မာ ဘ၀ကို ဖြစ်စေမည်ဟု မိမိကိုယ်မိမိ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင်နှင့်သာ
ကတိပေးလိုက်ပါ။ သင်... အချိန်မီ ပါသေးတယ်။
အားလုံးပဲ ဒီပုံပြင်လေး အတိုင်း အတုယူ နိုင်ကြပါစေ........လို့...........
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Saturday, May 16, 2009 in ဒီလိုပဲပေါ့
ကျွန်တော်အကြီးကြီးညစ်နေရပါတယ့်မြန်မာပြည်ကလိုပဲ blogspot တွေကိုကျွန်တော်တို့ တရုတ်
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်ဒီစိတ်နဲ့ပဲ လေနေခဲ့ပါတယ်.သွားပြီပေါ့ ကျွန်တော်blogရေးခြင်းကိုဒီလိုနဲ့ပဲ
တော့်ကိုစိတ်ဓါတ်ကြံခိုင်မှုရှိအောင်အားပေးခဲ့တဲ့ညီမလေး ချစ်ပါးလုံး ကိုလဲကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်
မအိပ်ပဲsoftwareလေးကိုရှာပေးထားတာပါဆိုတဲ့ အကို တင်မိုးအောင့့်ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းနေတဲ့
အချိန်မှာအနီးကပ်အားပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ချစ်လှစွာသောသူငယ်ချင်းများ Chatထဲကနေ အားပေးခဲ့တဲ့
DJတေးမဟော်နဲ့ အဖြူရောင်သံစဉ်မှ DJသူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျွန်တော်အကြီးကြီးကျေးဇူးတင်
တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော့်ကို အကို reenoemann တပ်ဂ် ထားတဲ့ တပ်ဂ်postလေးကိုလဲကျွန်တော်အ
ကျွန်တော်ညီမလေး ချစ်ပါးလုံး ကိုတောင်ပြောမိပါသေးတယ်စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့အချိန်မှာဒီblogလောက
အဓိကပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အိမ်လေးတွေဆီကိုအရင်လိုအလည်
ငြိမ်နေတဲ့ ကန်ရေပြင်လှုပ်ခပ်သွားအောင် သူမ အညိုးတကြီးနဲ့ ပြစ်ခတ်ခဲ့တာ ခဲတစ်လုံး မဟုတ်ပါဘူး..
ကျွန်တော့် အနာဂတ်အတွက် ဟိုးတစ်ချိန်လောက်ကတည်းက ကျွန်တော့်လက်မှာ ဝတ်ထားတဲ့ သူ
ပေးခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ လက်စွပ်လေးပါ... အခုတော့ သူကိုယ်တိုင် လွင့်ပစ်လိုက်ပြီ... တန်ဖိုးမကြီးပါဘူး..
ဒါပေမယ့် ဘ၀တစ်ခု ချိုးနှိမ်ထားပါတယ်.. အခုတော့ ကန်ရေပြင်အောက်မှာပေါ့... သူ့ကတော့ နာကြည်း
ချက်တွေတစ်ချို့ကြောင့် အပြုံးမပျက်ပါဘူး. ဒါဟာ လက်ဝှေ့ ပွဲ တစ်ပွဲဆိုရင် ဒီတစ်ကွက်ဟာ ကျွန်တော့်
ကျွန်တော့် လက်မှာ ဟာတာတာရယ်ပါ.. အနှစ်နှစ်အလလလက်စွပ်ကလေးနေရာယူခဲ့တဲ့နေရာကတော့
ဖြူဖျော့ပြီးကျန်နေတယ်... ဒါအမှတ်တရလား.. ဘယ်အချိန် ပျောက်ကွယ်သွားမလဲ...
ကျွန်တော့် ဘ၀မှာ အရာရာ ပျောက်ကွယ်သွားသလိုပါပဲ...နေရာလွတ်တွေလေ.. ကျွန်တော့် နဘေးသူရှိ
နေသေးတယ်... ခုံတန်းရှည်တစ်ခုဟာ ကမ္ဘာတစ်ခုခြားအောင်ကွာဝေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော် ဘယ်တုန်း
ကမှ မထင်ဖူးဘူး... သူကရော... အခုထိ မတုန်လှုပ်သေးပါဘူး.. ကျွန်တော် ရူးလိုက်ချင်တယ် သူပစ်
လိုက်တဲ့ လက်စွပ် .. ကျွန်တော် ပြန်ဆယ်ရအောင် ရေတောင် မကူးတတ်... ကန်ရေပြင်အောက် မှာ
ကျွန်တော်ဟာ လက်စွပ်နဲ့အတူ မြုပ်သွားတော့မယ့် ဘ၀ကို ရွေးချယ်လိုက်ချင်တယ်...
“နင် ရက်စက်လိုက်တာဟာ” ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ ရင်ထဲက စကားပါ... သူကြားပါတယ်.. မတုန့်
ပြန်ဘူး... ခဏခဏ စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါတော့ မချော့နိုင်တော့ဘူး...
“နင် စိတ်ဆိုးလဲ ငါတို့ အမှတ်တရကို မဖျတ်ဆီးသင့်ပါဘူး” သူကို ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်သည်..
သွေးအေးတဲ့သူမက တည်ကြည်နေတဲ့ မျက်လုံတစ်ခုနဲ့ စူးစူးရှားရှားကြည့်နေတယ်... ဒီမျက်လုံး ..
ကျွန်တော့် တစ်သက်လုံး ကြောက်ခဲ့ရတယ် မဟုတ်ပါလား...
“နင် ငါ့ကို ဘာကြောင့် အဲ့လောက်စိတ်ဆိုးနေတာလဲ”
“နင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်” တိုတိုပြတ်ပြတ် ပထမဆုံး သူစပြောတဲ့ စကားသံတစ်ခု ဒါပေမယ့် ကျွန်
“နင် နောက်မှ သွားလဲရသားနဲ့”
“ဒါပေမယ့် ငါ full scolar ရအောင် မနည်းကြိုးစားခဲ့တာ နင်သိသားပဲ အခုမသွားရင် ငါမရတော့ဘူး
“နင် အခုမသွားရလဲ ငါနင့်ကို ထားပေးမှာပေါ့ ငါ့အတွက် နင်ဘာမှမလိုဘူး”
ဟုတ်ပါတယ် သူက တော့ ကျွန်တော်ကို ကျောင်းထားပေးနိုင်ပါတယ်.. လိုချင်တာ ပေးနိုင်ပါတယ်..
တောင့်တသမျှဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်.. သူ ငွေကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲသိတယ်..လူကို ဘယ်လို
ကျောင်းရမလဲ သိတယ်.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အကြောင်း... ဟုတ်တယ် ကျွန်တော့်အကြောင်း
သူအခုထိမသိသေးဘူး... ကျွန်တော် ရင်နာမိတယ်...
ကျွန်တော်ဟာ သူ့ကို လမ်းပြမယ့် လူတစ်ယောက်ပါ... သူ့ကို သူ့စိတ်ကြိုက် ထားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့
သူတစ်ယောက်ပါ... ကျွန်တော့် ဘ၀ အဖော်ကို ကျွန်တော် ခေါ်ထားတဲ့ မိုးတွေကြားမှာပဲပျော်စေချင်
တယ်...ကျွန်တော့် အရိပ်ခိုစေချင်တာပေါ့... သူ့အရိပ်ကိုတော့ ကျွန်တော် မမှီချင်ဘူး.. အခုတော့ သူ့စ
ကားမှာ. ကျွန်တော်ဟာ သူညွန်ရာသွားရမယ့် နွားသာသာ ဘ၀ပဲကျန်တော့တယ်... ကျွန်တော့်ကို သူအ
ထင်သေးတယ်.. ကျွန်တော် ရင်နာပေမယ့် သူ့ကို အပြစ်မတင်ရက်ဘူး.. ဘ၀ဆိုတာဘာလဲ သူကောင်း
ကောင်း မကြည့်ဖူးခဲ့ဘူး.. ကျွန်တော်ကတော့ ကောင်းကောင်းကခဲ့ဖူးတယ်...
“မလိုဘူး... နင်ကျောင်းမတတ်နဲ့တော့ ငါတို့နှစ်ယောက် လက်ထပ်ပြီးရင် ငါ့အဖေ စီးပွားရေးနင်လုပ်
သူစကားတွေ.. ဒီစကားတွေ.. ကျွန်တော့်ကို နားမလည်သေးဘူးဆိုတာ သေချာတယ် ... ကျွန်တော်ဟာ
သူ့အဖေ စိုက်ခဲ့တဲ့လယ်ကို စောင့်ရမယ့် အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး... ကျွန်တော့် လယ် ကျွန်တော် စိုက်မယ့်
ကောင် သူများဆောက်ပြီးသားအိမ်ကို မွန်းမံပြီးနေချင်တဲ့ ကောင်မဟုတ်ဘူး.. ကိုယ့် အိမ် ကိုယ်ဆောက်
“ငါ့အတွက်လိုတယ်... ငါ့ဘ၀အတွက်လိုတယ်” ကျွန်တော် ခေါင်းမာပြရစေ...
“ဒါဆို နင်သွားပေါ့ နင့်ဘ၀မှာ ငါမလိုတော့ဘူး ဒါကြောင့် လက်စွပ်တွေ ကတိတွေ အမှတ်တရတွေ
“နင်တကယ်ပဲ ပြတ်နိုင်ပြီလား .. ၃နှစ်ဆာတိုတာ နဲနဲလေးပါဟာ .. ငါ့ကိုယ် ငါ... ”
“ငါမကြားချင်ဘူး... နင် သွားမယ်ဆို ငါ့ဆီမလာနဲ့ ငါဆီလာရင် နင်မသွားနဲ့ဒါပဲ”
“ငါ့မှာ တခြားနည်းလမ်းရွေးစရာ မရှိတော့ဘူးလား” ကျွန်တော်လေသံတွေ ပျော့ကျနေလိုက်တာ...
full scolar ရတယ်ဆိုလို့ ပျော်ခဲ့တဲ့ နေ့က မာန်တွေတောင် ဘယ်ပျောက်သွားလဲ မသိဘူး... သူနားမ
လည်ဘူး... ဒါကျွန်တော့် အောင်မြင်မှုတစ်ခု.. သူမခံစားတတ်ဘူး...
“အေး.. ဒါဆို ငါပြစ်လိုက်တဲ့လက်စွပ် နင် ပြန်ယူလာခဲ့ရင် နင်လုပ်ချင်တာ ငါလုပ်ခွင့်ပြုမယ်”
စကားအဆုံးမှာ လှည့်ထွက်သွားတဲ့ သူမ ကျောပြင်ကို ကျွန်တော် ငေးရင်းကျန်ခဲ့တယ်... သူ ကျွန်တော်
ရေမကူးတတ်တာတော့ သိနေတယ်... သူ့အချစ်ကိုလဲ ရ ကျွန်တော့် ဆန္ဒလဲ ပြည့်အောင် ကျွန်တော် ဒီ
လက်စွပ်ကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ... ကန်ရေပြင်.. နက်တယ်... ကျွန်တော့်ဘ၀ကတော့ သူမရှိတော့ဘူး
ဆိုတာ သေချာသွားပါပြီ... ရည်မှန်းထားတဲ့ဘ၀ ကြွေမွပြိုပျက်သွားတယ်... ကျွန်တော် တွေဝေနေပါ
လက်စွပ်လေးကို လည်မှာဆွဲဖို့ ဆွဲကြိုးမှာသီလိုက်တယ်... သူသိရင်ရော... သူကတော့ ရေထဲကျသွား
ပြီလို့ ထင်မှာပေါ့... တကယ်ပဲဝေးကြရင် အမှတ်တရတစ်ခုတော့ ကျွန်မပိုင်ချင်တယ်... အခုတော့ သူ့
လက်စွပ်တစ်ခု ကျွန်မ လည်မှာနေရာယူလို့ပေါ့... အခုအချိန်အထိ သူ့ကို ကျွန်မ စိတ်ဆိုးနေမိတယ်..
အရေးမပါတော့မယ့် အရာတွေကို ဆုတ်ကိုင်ချင်နေတယ်... ကျွန်မအနားက အဝေးသွားချင်တယ်...
ကျွန်မ လွတ်ပေးလိုက်တယ်... မဖမ်းရက်တော့ဘူး အတောင်ပံရှိတဲ့ငှက်... ကျွန်မ လှောင်ချိုင့်လှလှတွေ
နဲ့ မဖြားယောင်းချင်တော့ဘူး.. ကျွန်မကျေနပ်ပါတယ်... သူ့ကိုယ်တိုင် ပေးထားတဲ့လက်စွပ်ကလေး အခု
အချိန်အထိ ကျွန်မ လက်သူကြွယ်မှာ နေရာယူနေသေးတယ်... ကျွန်မလည်မှာတော့ သူ့လက်က လက်
စွပ်လေးပေါ့... အခုတော့ ဝေးတော့မယ်... ဘာတွေနဲ့ ကျွန်မနှစ်သိမ့်ရမလဲ... သူမုန်းသွားမလား ..
မတွေးတော့ဘူး..ဝေးမယ့်အတူတူ.. သူ့အတွေးထဲကျွန်မကြောင့်ဘာမှ နှောင့်နှေးမနေစေချင်တော့ဘူး...
အရေးကြီးနေတဲ့ လူတစ်သိုက်ကြောင့် ကျွန်မ အတွေးတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတယ်... လူတစ်သိုက်
သယ်ထုတ်သွားတဲ့ ဖြူဖျော့နေတဲ့ လူတစ်ယောက်... ကျွန်မ ဘ၀တစ်ခုလုံး ပြိုလဲ ကျသွားပါပြီ...
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Wednesday, May 13, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့
ကိုယ်လေမင်းလက်လေးကိုကိုင်ထားရမှ လုံခြုံတယ်လို့ ခံစားရတယ်(လက်အားနေရင်အိပ်ကပ်တွေလျှောက်နှိုက်တော့မယ်...
ကိုယ်လေမင်းနှုတ်ခမ်းတွေ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်လာရင်ရင်တွေအရမ်းခုန်တာပဲ(တွေ့သမျှမုန့်သည် လျှောက်ခေါ်တော့မယ်)
ကိုယ်လေမင်းဆံပင်လေးတွေ သပ်နေတာမြင်ရင်ရင်တွေအရမ်းခုန်တယ်(အကြောင်းမရှိုအကြောင်းရှာပြီး beauty spa သွားတော့မယ်)
ကိုယ်လေအမြဲတမ်း မင်းအကြောင်းပဲ တွေးနေတာ(ဘယ်လိုလှိမ့်ရင် ကောင်းမလဲလို့)
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Tuesday, May 12, 2009 in ကျွန်တော့်အကြောင်း
ဘာမှန်းမသိတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ပြဿနာတစ်ခုက ဘာမှန်းမသိတဲ့နေရာကနေ
ဘာတွေဖြစ်မှန်းမသိလောက်အောင် ဘာတွေဘယ်လိုဖန်လာတယ်မသိပါဘူးကွာ ဘာတွေလို့ခေါင်းစဉ်
တပ်လို့မရသလို ဘာတွေလဲဟလို့တောင်အော်ယူမိတဲ့အထိပါပဲ ဘာတွေလဲကွာ့
ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိခဲ့တဲ့ငါ့ကို ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရလိုက်ခင်မှာပဲ
ဘာလို့ငါ့ဆီကိုမှရောက်လာရတာလဲကွာ ဘာလို့ခွင့်မတောင်းပဲဝင်လာရတာလဲ ဘာလို့ညှာတာမှုမရှိရ
တာလဲ ဘာလို့ငါ့ဆီကိုမရက်ရက်စက်စက်နှဲ့ ဘာလို့့ဘာလို့လဲကွာ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့တဲ့ကောင်ပါကွာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါမမှုခဲ့ပါဘူး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တုံးတိုက်တိုက်
တော့ကြောက်နေမိတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအအကြိမ်ကြိမ်ဆုတောင်းနေမိတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်နက်ရှင်
အရမ်းဒေါကန်တယ် အရမ်းဝမ်းနည်းတယ် အရမ်းစိတ်ညစ်တယ် အရမ်းပေါက်ကွဲလာတဲ့အခါမှာတော့
အခုလို cyber café ကိုပြေးလာလိုက်မိတော့တယ်။ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့ ဘလော့ကိုပစ်ထားခဲ့ရတဲ့
အခုတော့ ဘလော့ နဲ့လဲဝေးပြီ DJနဲ့လဲဝေးပြီ သယ်ရင်းတွေနဲ့လဲဝေးနေရတယ့်ကျွန်တော့်ကိုဝိုင်းပြီး
စာကြွင်းးးးးးးကျွန်တော်တို့မြို့မှာ sevsr ပြင်နေတဲ့အတွက် connection ကရက်အနည်းငယ်တော့ဒီလိုနဲ့ပဲ
နှစ်ပါးသွားနေကြရပါတယ်။ ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲအခုကျွန်တော်cyber café ကပြန်လာပြီးအိမ်ရောက်
တော့ကွန်နက်ရှင် ကနဲနဲgood နေပြီးဗျ။ဟဲဟဲ ဒီစာကြွင်းလေးကို ကျွန်တော်အိမ်မှာ connectionစမ်းရင်း
နဲ့ရေးလိုက်တာပါ။ဒီလိုမှန်းသိရင် cyber ကိုမသွားပါဘူး ဟီးးးပိုက်ပိုက် နဲနဲပြုတ်သွားတယ်တစ်ယောက်
ထဲသွားရမှာပျင်းတာနဲ့ သယ်ရင်းသုံးယောက်ကိုအချောဆွဲသွားတာ သူတို့အတွက်ပါရှင်းလိုက်ရတယ့်
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Sunday, May 10, 2009 in ဒီလိုပဲပေါ့
ဒီ post လေးဟာ့ကျွန်တော့်အတွက်တော့အမှတ်တရ post လေးပါ့အိမ်ထောင်သည်ဘဝ post
မတောက်တစ်ခေါက်ဝင်ခံစားကြည့်ပြီး ရေးဖွဲ့ထားတာ ဖြစ်သလို ပိုပြီးအမှတ်တရဖြစ်သွားစေတာကတော့
ကျွန်တော်ဒီ post လေးရေးနေတဲ့အချိန်မှာ ချစ်တဲ့ ဖေဖေ နဲ့ အတိုက်အခံလုပ်ပြီးရေးနေရတယ်လေ့
အကြောင်းအရင်း ကတော့ ကျွန်တော်ဒီ post လေးရေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဖေဖေ့ အဆူကိုခံရပြီး ဖေဖေ့ကို
စိတ်ကောက်ကောက် နဲ့ ရေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့့ဖေဖေ နဲ့ စိတ်ကောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ထည့်
ပြီးပြောမပြတော့ပါဘူ့း့ပြောပြရင်ရယ်နေကြမှာဆိုးလို့့တော်ပြီ စိတ်ဆိုးလာပြန်ပြီ မပြောတော့ဘူ့း
ဘာလဲဆိုတော့ သူ ဒေး ကိုချစ်တယ်။ဒါလောက်ပါပဲ။ဒေး ဆိုတာကျွန်တော့်ရဲ့ ချစ်လှစွာသောဇနီး အသစ်စက်
စက်ကလေး ပဲလေ့ဒီနေ့မင်္ဂလာသက် ၆လမြောက်နေ့လေ့လပတ်လည်နေ့ပေါ့ ။ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်
မိဘတွေ နဲ့ ဒေး ရဲ့ မိဘတွေ ကိုပါဖိတ်ထားတယ်လေ့သားနဲ့သမီးတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ မှာမျက်နှာစုံညီဲနဲ့ တူ
တကွ စားကြသောက်ကြမယ်ပေါ့့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မမောနိုင်မပန်းနိုင်နဲ့တစ်မနက်လုံးပြင်ဆင်
ထားကြတယ်လေ့စားစရာသောက်စရာအသီးစုံ အချိုပွဲ ပြီးရင်ဖေဖေ မေမေ တို့ကိုကန်တော့ဖို့အတွက်
ပစ္စည်းတွေကအစ အစစ အရာရာဒေါင့်စေ့နေအောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားကြတယ့်
ပြီးတော့ဒေး ရဲ့ ဖြူဖွေးနူးညံ ပြီးအကြောစိမ်းလေးတွေလျှက်သန်း နေတဲ့ ဘယ်ပါးပြင်လေးကို ကျွန်တော့်
ရဲ့ အမြတ်နိုးဆုံးအနမ်းတစ်ပွင့် ခြွေချပစ်လိုက်တယ့်ဒေး ရဲ့ ကိုနော်ဆိုတဲ့အသံတိတ်မျက်စောင်းလှလှ
လေးအောက်မှာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ရင်ခုန်သံကာတာကျိုးပေါက်သွားခဲ့တယ်။တိတ်တိတ်လေးမပြော
ရောက် လာသည့်တိုင်အောင် ဒေးရဲ့မိဘတွေရောက်မလာခဲ့သေးဘူးပေါ့့အချိန်ကညနေ၅နာရီတိတိ
ဒေး ကတော့စိတ်ပူနေပြီပေါ့့ရောက်လာသင့်ပြီလေ့ကျွန်တော့်မိဘတွေလဲစိတ်ပူနေကြပြီလေ့သိ
တယ်မလာ့းချစ်ယောက်ခမတွေပဲလေ့ဒီလိုနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိပေမဲ့ အဓိပ္ပယ်တွေလိုနေသေးတဲ့ ညစာ
စားပွဲလေးမှာ စိုးရိမ်စိတ်တွေပူပန်နေပြီပေါ့ အသံတွေတိတ်ဆိပ်နေတဲ့ညစာစားပွဲလေးမှာဒေးကစပြီး
ညစာ စားပွဲလေးမှာဒေး ကိုလိုက်မပို့နိုင်ပဲကျန်နေခဲ့ရင့်းဒေးကတော့ကားကိုတလကြမ်းမောင်းပြီး
ထွက်ခွာသွားလေရဲ့့ကျွန်တော်ကတော့ အိမ်ထောင်သစ်ဘဝတစ်ခုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစကား
ဖောင်ဖွဲ့ရင်း မေမေတို့နဲ့အတူအချိန်တွေဖြုန်းနေခဲ့ပါတယ့်ဒေးပြန်အလာကိုမမျှော်နေရင်းနဲ့ပေါ့့ဒီလို
လေးကို စတင် လိုက်ရအောင်ဆိုပြန်တော့လဲ မေမေတို့ရဲ့သဘောတူညီမူကိုမရခဲ့ပါဘူ့းစောင့်ကြတာပေါ့
သားရယ့်တဲ့။ဒီလိုနဲ့ပဲ လာတော့မယ်လာတော့မယ်နဲ့ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုလေးမှာ
ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အပူဒီဂရီ တွေမြင့်တတ်လာလေလေပါပဲ့့
အတွေးတွေရှုပ်ထွေးလာတယ့်ကားကိုတလကြမ်းမောင်းထွက်သွားတဲ့ ဒေ့း့လမ်းမှာများ တစ်ခုခု
များပျက်နေလို့လာ့းဒေး မေမေ တို့အလုပ်တွေများရှုပ်နေလို့လာ့းအတွေးတွေ့လားပေါင်းများစွာနဲ့
အခုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မိဘတွေတတ်ရောက်ချီးမြှင့်တဲ့ဒီပွဲလေးမှာ ကျွန်တော်မေမေ တို့ကိုထားခဲ့ပြီး
ထွက်သွားရလောက်အောင်လဲကျွန်တော် မလုပ်ရက်ဖူ့းကျွန်တော် မေမေ တို့ကိုလဲအရမ်းချစ်တယ့်
ပြီးတော့ ဒေး ကိုလဲချစ်တယ့်မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် မိဘတွေကိုဥပက္ခာပြုပြီးမိန်းမနောက်ကို
လိုက်သွား တဲ့သားတစ်ယောက် အဖြစ်လဲကျွန်တော်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးးးးဘာမှမဟုတ်ဖူးဆိုပေမဲ့ မေမေတို့
စိတ်ထဲမှာတော့ မကောင်းဖြစ်သွားမှာပဲလေ့ဒီတော့ ကျွန်တော် မေမေ တို့ကိုအရမ်းချစ်ပါတယ်။ဒေးရယ်
လိုက်တယ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲအိမ့်ရှေ့ကိုထွက်လာမိတယ်လေ့နေတောင်ဝင်တော့မှာ
ဘာလဲဆိုတော့ သူ ဒေး ကိုချစ်တယ်။
အမေ များနေ့မှာ ဖေဖေ နဲ့စိတ်ကောက်ဖြစ်ခဲ့တယ့်အမှတ်တရပါပဲ့့ကံကောင်းတာတစ်ခုကအမေများနေ့မှာ
မေမေ နဲ့စိတ်ကောက်တယ်ဆိုပြီးမဖြစ်သွားတာကိုပေါ့့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖေဖေ့ ကိုအရမ်းစိတ်ဆိုးတယ့်ဟွန့်း
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Thursday, May 07, 2009 in သားသမီးတွေရဲ့မိဘ
မှိန်တိန်တိန်မီးရောင်အောက်မှာ အသက်ကိုအလုအယက်ရူသွင်းရင်း မှိန်တိန်တိန်နဲ့အရောင်မဲ့နေတဲ့
ဘဝအတွက် ပြေရပြေရာပြေကြောင်း အတွေးညစ်ညစ်တချို့ကိုလျှော်ဖွတ် ကြည့်လိုက်တယ့်အလို့
ဒုက္ခ ပါပဲ လိုက်လေဝေးလေပါပဲလာ့းအတွေးတွေဟာ ဖြေလေ ဆိုးလေ ဆိုသလိုပဲ တိတ်တိတ်လေး
ထိုင်နေရပေမဲ့ ပေါက်ကွဲ လာမိတယ့်အော့်ငိုပစ်လိုက်ချင်တယ့်မေမေတို့ကိုအရမ်းလွမ်းတယ့်
အရမ်းသတိရတယ့်ဖြစ်နိုင်ရင် မေမေတို့ကိုထိုင်ကန်တော့ လိုက်ချင်တယ့်အဝေးရောက်နေတဲ့
သားတစ်ယောက်အနေနဲ့အတွေးထဲကနေပဲ ကန်တော့နေခဲ့ရတာဟာ ကြာနေခဲ့ပါပြီ။တစ်နေ့နေ့ပေါ့ ဆို
မသွားပါနဲ့သားရယ့်ဆိုတဲ့စကားကိုငြင်းဆန်ပြီးကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက် ခဲ့တာမဟုတ်ရပါဘူး ဒုက္ခ
ကိုပေးအပ်ပြီးမှ ရှိစုမဲ့စုနဲ့ ထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့ သားမိုက်တစ်ယောက်ပါ။အတွေးထဲမှာကတော့ ချမ်းသာရင်
မိဘတွေကိုတင့်တောင့်တင့်တယ် ထားနိုင်မှာပဲ ဆိုတာတစ်ခုထဲပဲပေါ့ ။အခုတော့သိပါပြီမေမေရယ့်
အရိပ်အောက်မှာ မနေပဲ ထီးတစ်ချောင်းကိုအားကိုးပြီ အပူဒဏ်ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုပြီး ပြေးထွက်ခဲ့တဲ့
သားအခုတော့ ကန္တရထဲမှာ ရေငတ်နေသလို မေမေအရိပ်ကိုတောင့်တနေမိခဲ့ပြီလေ့အသွားရှိရင်အ
လမ်းကိုတော့တွေ့နေပါရဲ့ ဘယ်မှာလဲ ငါ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ငါ့အချိန်တွေ ငါ့ခံစားချက်တွေကိုနောက်ကွယ်
မှာစတေးခံနေရပြီ့အထင်ကြီးခဲ့တဲ့ဒီနေရာဟာ ငါ့အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေ
ကို အောက်ဆုံးနှိမ်ချပြီး တတ်နင်းထားခဲ့မှန်းငါအခုသိလိုက်ရပါပြီ့
ငါ့အတွက် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆိုတာကို ရိုးသားမှုနဲ့မတတ်လှမ်းနိုင်ခဲ့သေးဘူးကွာ့အချိန်နဲ့အမျှကြိုး
ဆိုရင်ဟာသများဖြစ်နေမလားဟင့်လစဉ်တိုင်းမှာ မုသာဝါဒကြွယ်ကြွယ် နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်း
ကလေးဆက်ရုံ ပိုက်ဆံလေးအနည်းငယ်ပို့ရုံနဲ့ ဟန်ဆောင်ကျေနပ်နေခဲ့ရသမျှ ဟာအခုတော့ မေမေလို့
အခုအချိန်မှာသားအဝေးကနေပဲ ကန်တော့လိုက်ပါရစေ့တစ်နေ့နေ့ပါ ဒီစိတ်ကုန်စရာကောင်းတဲ့နယ်
မြေကြီးကို သားအပြီးအပိုင် စွှန့်လွှတ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ တစ်နေ့သားမေမေတို့အရိပ်အောက်ကိုပြန်လည်ခို
ဝင်လာမှာပါ့အခုတော့ပြောလျှော့နေပြီဖြစ်တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ဒီစာလေးကိုချရေးရင်းနဲ့ပဲအား
တင်း ထားလိုက်ပါတယ့်တစ်နေ့နေ့မှာ ဖေဖေ မေမေလို့အားရပါးအော်ခေါ်ပြီးအိမ်ပေါက်ဝကို သားအ
ရောက်လာခဲ့မှာပါ။အခုတော့အခုတော့့တိတ်တိတ်လေး ဆန္ဒတွေကိုခဝါ ချထားရင်းနဲ့ပဲ ချောင်
ကြားမှာ မျက်ရည်ဝဲ နေပါရစေ့ဖေဖေ နဲ့ မေမေ ကို အရမ်းချစ်တဲ့့
အဝေးရောက့့်တဲ့့သားးးး
မိဘကိုချစ်ပေမဲံ့ အဲဒီအချစ်ကိုဥပေက္ခာပြုရင်း အဝေးမှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ သားများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး
အများကြီးကြိုးစားဖို့လိုနေသေးတဲ့့ဖြိုးဇာနည့်ည့၃း၀၅ တိတိ
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Tuesday, May 05, 2009 in GTalk အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ကျွန်တော်တို့ Gtalk ကနေမြန်မာပြည်ဖုန်းကို SMS ပို့ကြည့်ရအောင်နော့်၁၀မိနစ်လောက်တော့ကြာ
မေ့တော့မလို့ ခက်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗျ့အဲတာက invited လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့ ကျွန်တော်လုပ်
တုန်းကတော့ ဆယ်ခါလောက် Add မှရတယ်ထင်တာပဲ့ခက်တဲ့အပိုင်းလေးကတော့အဲတာပါပဲဆိုပါ
သယ်ရင်းတို့အနေနဲ့အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ မိမိ Gtalk account မှာဒီ Mail လေးကို add လုပ်ဖို့ပါပဲ။
တစ်ခုတော့သတိပေးချင်ပါတယ့်အဲတာကတော့သတိဆိုတာပိုသည်မရှိပေါ့ဒါလေးကို Add တဲ့အခါမှာ
ကိုယ်အမြဲသုံးနေတဲ့ account မှာမဟုတ်ပဲ တခြားအရံ account တစ်ခုမှာ Add စေချင်ပါတယ်။ဆရာ
လုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုမျိုး project အသစ်တွေဟာ password မခိုင်ရင် စိတ်မချရတာကြောင့်
ကြိုတင်ကာကွယ်စေချင်တဲ့သဘောပါ။ကဲကဲ သေချာဖတ်တော့နော့်READY GO
အရင်ဆုံးဒါလေးကို Gtalk မှာ Add လိုက်ပါ။ gtalk@etmsms.com လို့ invited လိုက်ရုံပါပဲ။စိတ်ရှည်
ရှည် Add လိုက်ရင်တော့ online အနေနဲ့တတ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲလို online ဖြစ်လာပီဆိုရင်တော့ ဒီလို
လေးလုပ်ပြီးပို့ရုံပါပဲခင်ဗျာ့gtalk message box ထဲမှာ sms 09+++++++ hello nay kg lar အဲ
လိုမျိုးရိုက်ရပါတယ်။sms နဲ့ ဖုန်းနံပတ်အကြားမှာ Spacebar ခံရပါတယ်။ ဖုန်းနံပတ်နဲ့ hello အကြားမှာ
spacebar ခံရပါတယ်။ဒါလောက်ပါပဲ့့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ့်ဘာမှထွေထွေထူးထူးလုပ်စရာမပါ ပါ
ဘူး။အထူးသဖြင့် country code တွေဘာတွေဘာမှကိုမလိုတာကတော့ စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့လေ့
အထူးသဖြင့်အဝေးတစ်နိုင်ငံမှာရောက်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လို သူတွေအတွက်ကတော့ တော်တော်
လေးကို အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ application လေးတစ်ခုပါပဲခင်ဗျာ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ နောက်
ကျတယ်ပဲပြောပြောဒီနည်းလေးကိုအခုမှပဲသိတာပါ။သိသိချင်းပဲ စမ်းသပ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Sunday, May 03, 2009 in ဇာနည်ကြိုက်တာဒါလေးတွေ
ပစ်ကျသွားသည်။အဲလိုပါပဲ ကျွန်တော့်နှလုံးသားလဲ ထိုနည်း၎င်းပစ်စက်လက်ခက် ဗရမ်းဗတာ ပြုတ်ကျ
ကြိတ်ခံရင်း မင်းနာမည်ကို ငါ့ဘဝထဲကဆွဲထုတ်ဖို့ ငါကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်လေ။ဟားဟားအချစ်က ဟာသပါ
ပဲကွာ အသက်ရှူနှုန်းတွေကို လေးကန်နေလောက်အောင်အထိခံစားရလိမ့်မယ်လို့ ငါလုံးဝမတွေးထားမိ
ဘူး။အခုတော့ ငါလေးလေးနက်နက်ထားခဲ့တဲ့ အချစ်တွေကငါ့ကို လေးနက်တဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ကျေးဇူး
ရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဒီလောကကြီးမှာ ငါပေးသလောက်ပြန်မရခဲ့တာဟာလဲ တရားပါတယ်ကွာ။မဟုတ်ရင်ငါ
ဟာ လောကကြီးကိုအရွဲ့တိုက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့့ဟတ်ဟတ့်မဟုတ်ဖူးလာ့းသေချင်
ကိုသူမသေခင်မှာစိတ်ရှည်ရှည်ရှင်းပြခဲ့ချင်အုံးမှာပါ။ငါလဲအတူတူပဲ ငါလွမ်းနေရတဲ့ ငါခံစားနေရတဲ့ဟာသ
တစ်ပုဒ်အကြောင်းတွေကို လူတစ်ယောက်ကို ဂဃဏနပြောပြခဲ့ဖူးတယ့်ဟားဟာ့းလူတွေကလဲဟာ
သပါပဲကွာ့ငါပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေ ကိုပေါက်စီသုံးလုံး လ္ဘက်ရည်တစ်ခွက်နဲ့ လဲလှယ်ပြီးရင်းလိုက်
ပလုံပလုံနဲ့ငါ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တော်တော်များများကိုမင်းကြောင့် နစ်မြုပ်ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ငါ့ဘဝမှာ
ဟား တတ်လဲတတ်နိုင်ပါလားကွာ မင်းမို့လို့ လုပ်ရက်တယ့်sample တွေနဲ့တန်းတူညီနေတဲ့ ငါ့ဘဝမှာ
လည်ထွက်နေအောင် ပျာယာခတ်မှုတွေနဲ့မင်းကို အစစအရာရာ အလိုလိုက် အလိုက်သိခဲ့တဲ့ ကောင်ပါ
ကွာ။အခုတော့ ဘာတဲ့့ဟားဟားမင်းရဲ့ “ကို ကျွန်မ တို့နှစ်ယောက်××××××××××”ဆိုပြီး
မျက်ရည်လည်ချင်ယောင်ဆောင်လို့ မင်းပြောခဲ့တဲ့reason တွေကိုငါပြန် တွေးမိလိုက်တိုင်း ရယ်ရတာအူ
တတ်မတတ်ဖြစ်ရလွန်းလို့ ပြန်မပြောပြတော့ပါဘူးကွာ့။သွားပါ့သွားစမ်းပါ ဇာနည် တဲ့ နောက်လှည့်
ကြည့်တတ်တဲ့ထုံးစံ မရှိခဲ့ဖူးတဲ့ကောင်ပါကွာ့အေးးးးးးးတစ်ခုတော့မှာလိုက်မယ် နောက်တစ်ခါငါလို
ကောင်မျိုးကိုတွေ့ ချင်ပါတယ် ဆိုလို့ကတော့ နောက်ဘဝမှာ မှငါပြန်စဉ်းစားပေးမယ်နော့်ဒါအချိုသာ
ဆုံးမင်းအပေါ်မှာငါ့ရဲ့တုန့်ပြန်မှုပါ့့သဘောပေါက်တယ်ဟုတ့်ရက်စက်မှုတွေကိ်ု ငယ်ငယ်လေးက
ထဲက သင်မပေးဖူးခဲ့တဲ့ မေမေ့ကိုတော့ငါဒီတစ်ခါအပြစ်တင် မိပါရဲ့ကွာ့သံယောဇဉ်တွေနဲ့ ကြီးပြင်း
လာခဲ့တဲ့ငါ့ဘဝ မှာ မင်းကိုရစ်ပတ်တွယ်နှောင်မိသွားတဲ့ကြိုးလေးတစ်ချောင်း ကိုတော့ငါနှမြောမိတာအ
တော့ဘူး။ဒါဟာ ငါမင်းအပေါ်မှာထားတဲ့ နောက်ဆုံးသံယောဇဉ်လက်ကျန်ပဲ ရှေ့လျှောက်ဖြတ်သန်းရမဲ့
မင်းဘဝခရီးမှာ ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွာ့
ပစ်ကျသွားသည်။ ကျွန်တော်အတွေးတွေနဲ့ထိုင်နေမိတာဘယ်လောက်ကြာသွားတယ် မသိပါဘူး ကြမ်း
တမ်းလွန်းလှတဲ့ ပြုတ်ကျသံ တစ်သံကြားတော့မှ ကျွန်တော် သတိပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော့်ဘေးကို
တစ်လိမ့်ချင်းလိမ် လာနေတဲ့ COKE ဗူးလေးကိုကျွန်တော်ကောက်ယူလိုက်မိတယ့်အဲဒီအချိန်မှာပဲ
ကလေး ငယ်တစ်ယောက်က “အကို အကို သားကိုအဲဒီဗူးလေး ပေးပါနော့်သားသွားရောင်းမလို့ပါ”
သည့်ကျွန်တော်ကသာ ထိုနေရာမှာရပ်နေရင်းက “အော့်မင်းလဲငါနဲ့ဘဝတူပါလားဗူးခွံလေး
ရယ့်”နောက်ဆုံးတော့ ငါ့ကိုလိုလားတဲ့ ဒေး ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆီမှာ ငါဟာမင်းလိုပဲဘဝ
ကိုခိုလှုံခွင့်ရလိုက်ပြီလေ့အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံခဲ့တဲ့ ဘဝတစ်ခုကိုငါအခုပိုင်ဆိုင်လိုက်ရပြီ ဒေး
မင်းရဲ့ မေတ္တာတွေအတွက်ပေါ့့
Posted by ဖြိုးဇာနည် on Friday, May 01, 2009 in ချစ်သူဖတ်ဖို့
ကျိုးတို့ကျဲတဲ နဲ့ညကိုရွက်ကြမ်းရေကျို ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ လတစ်ခြမ်းပဲ့ တစ်စင်းမင်းမူနေတဲ့ ညတွေအ
လယ်မှာပေါ့့မသဲကွဲတဲ့အာရုဏ်တွေကို သူ့အချစ်တွေနဲ့အလင်းပေးရင်း သဘာဝတရားရဲ့အနိုင်
ကျင့်ခြင်းကိုခံထားရတဲ့ မညီမညာဒီလမ်းကလေးပေါ်မှာ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်တွေကိုတံဆိပ်ကပ်ခဲ့ဖူး
တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ မညီမညာကွေ့ပတ်စီးဆင်းလာတဲ့ ဒုဒ္ဓဝတီ မြစ်ကမ်းနှဖူးလေးတစ်ခုမှာလေပြည်ညှင်း
တွေမဟုတ် တဲ့ လေစိမ်းကြမ်းကြမ်းတွေကြားက ရေစီးနဲ့အတူမြောပါလာတတ်တဲ့သစ်ရွက်ကလေး
တွေကို နှစ်ယောက်သားအပြိုင် ရေတွက်ခဲ့ ကြဖူးတယ်လေ။ဘယ်သူ့အချစ်ကပိုများလဲလို့ ရူးကြောင်
နှစ်ယောက်အတူလျှောက်ခဲ့ဖူးပါတယ့်ချစ်သူစုံတွဲပေါင်းများစွာအတွက် အထင်ကရဖြစ်စေတဲ့ ခရေပင်
လမ်း ကလေးထဲမှာမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ သစ္စာတွေနဲ့ နှစ်အဆက်ဆက် ဂုဏ်တတ်လာခဲ့တဲ့ ပိတောက်လမ်းက
လေးထဲမှာပေါ့့ခရေလမ်းလိုတော့ ရနံမွှေးပြန့် မှုမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး ။ဒါမေမဲ့ သစ္စာတရားကိုတန်ဖိုးထား
တတ်သော ပိတောက်ပင်အို ကလေးရဲ့ အရိပ်စစ်ကလေးအောက်မှာတော့ ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ သစ္စာမပျက်
ကြေး ဆိုပြီး သစ္စာ ပြုခဲ့ကြဖူးတယ်လေ့
ဆိုပြီး ဆုတောင်းနေကြတဲ့ ရွှေတီဂုံ ဘုရားကြီးမှာမဟုတ်ပေမဲ့ တို့နှစ်ယောက်တန်ဖိုးထားပြီးကပ်လှူထား
တဲ့ ဒီအာရုဏ် ဆွမ်းလေးကိုဘုန်းပေးနေတဲ့ ကိုယ်တော် ကလေးရဲ့ တရားရိပ်အောက်မှာပဲ တို့နှစ်ယောက်
ရဲ့အချစ်တွေကို ဘဝအဆက်ဆက်တည်မြဲနေစေဖို့ ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်လေ့ပီတိတွေ အပြည့်နဲ့
နှစ်ယောက်အတူလျှောက်ခဲ့ဖူးပါတယ့်နေဝင်ရီတရောမှာ အသံတွေအရောင်တွေစုံလင်နေတဲ့ အဓိပ္ပတ္တိ
လမ်းမကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ ဘဝကချပေးလာတဲ့အချိန်ဇယားပေါ်မှာ အကွက်ကျကျရုန်းကန်နေကြ
တဲ့ သာမည ရပ်ကွက် လေးတစ်ခုထဲမှာပေါ့့ပန်းပေါင်းစုံဖူးပွင့်နေတဲ့ ပန်းခြံတစ်ခုလို မွှေးရနံပေါင်းစုံ
မခံစားရပေမဲ့ သားငယ်ကိုတရှိုက်မက်မက် မွှေးကြူနေတဲ့ ညစ်ထေးထေး သားအမိနှစ်ယောက်ကိုကြည့်
ပြီ်းအပြုံးအသစ်တစ်ချို့နဲ့ တို့နှစ်ယောက် ကြည်နူး မိကြသေးတယ်လေ့
နှစ်ယောက်အတူတူသွားခဲ့ဖူးပါတယ့်လူတစ်ကာအထင်အမြင်ကြီးတဲ့ သမ္မတ လိုရုပ်ရှင်ရုံမျိုးမဟုတ်ပေ
မဲ့ အလှူတစ်ခုရဲ့ ဇတ်ပွဲတစ်ခုမှာမှာနှစ်ယောက်သားဖျာခင်းပြီး အလင်းပေါက် ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်လေ့အ
ကြမ်းအရမ်း အနူးအညံ တွေကိုခံစားရင်း ကိုယ်တိုင်တိုင်ခိုက်နေရတဲ့ ဘဝတိုက်ပွဲကြမ်းကြီးကို တဒင်္ဂ မေ့
နှစ်ယောက်အတူလျှောက်ခဲ့ဖူးပါတယ့်နှစ်ယောက်အတူတူသွားခဲ့ဖူးပါတယ့်တွေလိုမျိုးနင်နဲ့ ပါငါ နှစ်
ထဲလောက ကြီးကို ငိုသံတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ရင်း လျှောက်သွား နေခဲ့မိပြီဟာ့နင်မရှိတော့တဲ့လောကကြီး
မှာ နှစ်ယောက်အတူတူ လျှောက်သွားခဲ့ကြဖူးတဲ့နေရာလေးတွေဟာ လည်းငါ့ အတွက်ကဗျာမဆန်တော့
တယ့်အခုတော့နင်မရှိတော့တဲ့ လောကကြီးထဲမှာငါမသေ သေးပေမဲ့ ငါဟာရူးနေပြီ့ဟုတ်တယ်